Ramba Uine Hana Yakachena | Rudo rwaMwari
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Jula Kabiye Kannada Kazakh Kekchi Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Vezo Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
1, 2. Nei kambasi iri mudziyo unokosha, uye yakafanana papi nehana?
MUTYAIRI wengarava ari kucheka nepakati pemasaisai enyanza yakangoita zienda nakuenda; munhu ari kuchakaira ari oga musango raasingazivi riri kure nokunogara vanhu; mutyairi wendege ari kuibhururutsa nepamusoro pemakore akazadza denga rose. Unoziva here kuti vose vari vatatu vari kushandisa chii? Mumwe nomumwe wavo anofanira kuva nekambasi kana kuti mumwe mudziyo wemazuva ano, kana asina, angava aigochera pautsi.
2 Kambasi mudziyo usina kuoma kunzwisisa, kazhinji kacho wakaita raundi uine katsono kanogara kakanongedza kuchamhembe. Kana kambasi ichishanda zvakanaka uye ichishandiswa pamwe chete nemepu, inogona kuponesa upenyu. Inogona kufananidzwa nechimwe chipo chinokosha chatakapiwa naJehovha chinonzi hana. (Jakobho 1:17) Dai tisina hana, taizorasika zvokushaya tariro. Tikaishandisa zvakanaka, inogona kutibatsira kuwana nzira yedu muupenyu uye kuramba tiri mairi. Saka ngatikurukurei kuti chii chinonzi hana uye kuti inoshanda sei. Tozokurukura kuti: (1) Tingadzidzisa sei hana dzedu? (2) nei tichifanira kufunga nezvehana dzevamwe? uye (3) kugara tiine hana yakanaka kunotibatsira sei?
CHINONZI HANA UYE MASHANDIRO AYO
3. Shoko rokuti “hana” rinorevei muchiGiriki, uye rinotaura nezvechii chinoitwa nevanhu?
3 MuBhaibheri, shoko rechiGiriki rakashandurwa kuri “hana” rinoreva kuti “kuziva nechomumwoyo, kana kuti kuzviziva pachako.” Isu takasiyana nezvimwe zvisikwa zvose zvepano pasi pakuti Mwari akatiita kuti tizive zvatiri. Tinoita sokunge tinocheuka shure, tozviongorora toona toga kuti takarurama here kana kuti kwete. Hana yedu inoita sechapupu kana kuti mutongi ari matiri, ichiongorora zvatinoita, mafungiro edu, uye zvatinosarudza. Ingatitungamirira kuti tiite zvakanaka kana kuti kutinyevera kuti tisaita zvakaipa. Inogona kuzotinyaradza kana taita zvakanaka kana kuti ingatitambudza chaizvo kana taita zvakaipa.
4, 5. (a) Tinoziva sei kuti Adhamu naEvha vaiva nehana, uye chii chakaitika pavasina kuteerera Mwari? (b) Mienzaniso ipi yevarume vakatendeka vakararama chiKristu chisati chavapo inoratidza kushanda kunoita hana?
4 Ruzivo urwu rwakagara ruri muvanhu kubvira pakutanga chaipo. Adhamu naEvha vakaratidza kuti vaiva nehana. Izvozvo zvinooneka pakunyara kwavakaita vatadza. (Genesisi 3:7, 8) Chinosuwisa ndechokuti panguva iyoyo kurova kwehana dzavo kwakanga kusisabatsiri. Vakanga vatadzira Mwari nemaune. Saka vakasarudza vega kuva vapanduki uye mhandu dzaJehovha Mwari. Sezvo izvi vakazviita vari vanhu vakakwana vachitoziva havo zvavaiita, zvakanga zvisisaiti kuti vadzoke kuna Mwari.
5 Kune vanhu vakawanda vane chivi vakateerera hana dzavo, kusiyana naAdhamu naEvha. Somuenzaniso, murume akanga akatendeka, Jobho akati: “Ndakabatisisa kururama kwangu, uye handizokuregedzi; mwoyo wangu hauzondishori pamazuva angu ose.” * (Jobho 27:6) Zvechokwadi Jobho murume aiteerera hana yake. Saka aigona kuti hana yake haina kumushora, kana kuti kumutambudza nenyadzi kana kuti kumupa mhosva. Ona kusiyana kwakaita Jobho naDhavhidhi. Paasina kuremekedza Sauro, mambo waJehovha akazodzwa, “hana yaDhavhidhi yakaramba ichimutongesa.” (1 Samueri 24:5) Kutambudzwa nehana ikoko chokwadi kwakabatsira Dhavhidhi, kukamudzidzisa kuti asazvipamhidza.
6. Chii chinoratidza kuti hana chipo chakapiwa vanhu vose?
6 Vashumiri vaJehovha ndivo chete vane chipo ichi chehana here? Funga nezvemashoko akafemerwa omuapostora Pauro anoti: “Vanhu vemamwe marudzi vasina mutemo pavanoita zvinhu zvomutemo maererano nemasikirwo avakaitwa, vanhu ava, kunyange vasina mutemo, ivo mutemo pachavo. Ivo ndivo vanoratidza kuti zvinhu zvine chokuita nomutemo zvakanyorwa mumwoyo mavo, hana yavo painenge ichipupurirana navo uye, pane zvavanofunga, vari kupiwa mhosva kana kuti kunyange kupembedzwa.” (VaRoma 2:14, 15) Kunyange vaya vasingatombozivi mitemo yaJehovha, dzimwe nguva hana yavo ingaita kuti vaite zvinhu zvinoenderana nomutemo waMwari.
7. Nei pane dzimwe nguva hana yedu ingatiudza zvisiri izvo?
7 Zvisinei, dzimwe nguva hana inogona kutiudza zvisiri izvo. Nei? Kana kambasi ikaiswa pedyo nechinhu chesimbi, inogona kunongedza kumwe kusiri kuchamhembe. Uye ikashandiswa pamwe chete nemepu isina kururama, ingasatombobatsira. Kana hana yedu ichitungamirirwa nezvido zvakaipa zvemwoyo yedu, inogona kutiudza zvinhu zvisiri izvo. Uye kana isingatungamirirwi neShoko raMwari, tingakundikana kusiyanisa chakanaka nechakaipa muzvinhu zvakawanda zvinokosha. Saka, kuti hana yedu ishande zvakanaka, tinoda kutungamirirwa nomudzimu mutsvene waJehovha. Pauro akanyora kuti: ‘Hana yangu inopupurirana neni mumudzimu mutsvene.’ (VaRoma 9:1) Zvisinei, tingava sei nechokwadi chokuti hana yedu iri kupupurirana nomudzimu mutsvene waJehovha? Inotoda kudzidziswa.
KUDZIDZISWA KUNGAITWA HANA
8. (a) Mwoyo unogona sei kukanganisa hana, uye chii chatinofanira kutanga tafunga patinosarudza zvokuita? (b) Nei kumuKristu nyaya yehana isingapereri pakuti ari kunzwa isingamupi mhosva? (Ona mashoko omuzasi.)
8 Unosarudza sei zvokuita uchitungamirirwa nehana? Zvinoita sokuti vamwe vanoongorora zvavanofunga nezvinoda mwoyo yavo, vobva vasarudza kuita izvozvo. Vangabva vati, “Hazvisi kunetsa hana yangu.” Zvinodiwa nomwoyo zvinogona kuva nesimba zvikuru zvokuti hana ingatovhiringidzwa. Bhaibheri rinoti: “Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose uye wakaipa kwazvo. Ndiani angauziva?” (Jeremiya 17:9) Saka zvinodiwa nomwoyo wedu hazvifaniri kuva izvo zvinokosha. Asi tinoda kutanga tafunga kuti zvinofadza Jehovha Mwari ndezvipi. *
9. Kutya Mwari kuita sei, uye kunobatsira sei hana yedu?
9 Kana tikasarudza kuita chinhu tichitungamirirwa nehana yakadzidziswa zvechokwadi, zvicharatidza kuti hatingoiti zvido zvedu asi kuti tinotya Mwari. Funga nezvomumwe muenzaniso. Gavhuna akanga akatendeka Nehemiya, aiva nekodzero yokubhadharisa vanhu vaiva muJerusarema dzimwe mari nemitero. Asi haana kudaro. Nei? Aivenga nyaya yokuzogumbura Jehovha nemhosva yokudzvinyirira vanhu vake. Akati: “Handina kuita izvozvo nokuti ndaitya Mwari.” (Nehemiya 5:15) Kutya Mwari kwechokwadi, kunoreva kutya kugumbura Baba vedu vokudenga. Kutya kwokuremekedza kwakadaro kunokosha uye kuchaita kuti titsvake zvinotaura Shoko raMwari patinenge tichisarudza zvokuita.
10, 11. Ndezvipi zvinotaurwa neBhaibheri zvokufunga nezvazvo panyaya yokunwa hwahwa, uye tingatungamirirwa sei naMwari pakuzvishandisa?
10 Somuenzaniso funga nezvenyaya yokunwa hwahwa. Nyaya inowanzotarisana nevakawanda vedu kana takaungana nevamwe ndeyokuti, Ndonwa here kana kuti ndorega? Chokutanga tinofanira kuzvidzidzisa. Bhaibheri rinoti chii nezvenyaya yacho? Bhaibheri harirambidzi kunwa zvine mwero. Rinorumbidza Jehovha nokutipa kwaakaita chipo chewaini. (Pisarema 104:14, 15) Zvisinei, Bhaibheri rinoshora kunwisa uye mitambo yemafaro akanyanyisa. (Ruka 21:34; VaRoma 13:13) Uyezve, rinoti udhakwa chimwe chezvivi zvakaipa zvakadai soufeve noupombwe. *—1 VaKorinde 6:9, 10.
11 Hana yomuKristu inodzidziswa uye inoitwa kuti ishande nemitemo yakafanana naiyoyi. Saka kana tatarisana nenyaya yokuti tonwa here patinenge takaungana nevamwe, tinofanira kuzvibvunza mibvunzo yakadai seiyi: ‘Kuungana kwacho kuri kurongwa ndokwerudzii? Vanhu vangapedzisira vasisadzoreki uye vava kufarisa here? Ko panyaya yehwahwa ndinowanzoita sei? Ndinotambudzika here ndikahushaya, zvokuti ndinoita sendiri kutorwara kana ndisina kunwa? Ndinogona kuzoziva pokugumira here?’ Sezvatinofungisisa zvinotaurwa neBhaibheri tichizvibvunza mibvunzo yakadai, zvakanaka kuti tinyengetere tichikumbira Jehovha kuti atitungamirire. (Verenga Pisarema 139:23, 24.) Kana tichiita izvi tinenge tichikumbira kuti Jehovha atitungamirire nomudzimu wake mutsvene. Tinenge tichitodzidzisa hana yedu kuti ienderane nemitemo yaMwari. Zvisinei, pane chimwe chinhu chatinofanira kufungisisa nezvacho patinosarudza zvokuita.
NEI TICHIFANIRA KUFUNGA NEZVEHANA DZEVAMWE?
Hana yakadzidziswa neBhaibheri inokubatsira kusarudza kuti wonwa here kana kuti worega
12, 13. Zvii zvinoita kuti hana dzevaKristu dzisiyane-siyane, uye kunzwisisa izvozvo kuchatibatsira sei?
12 Dzimwe nguva ungashamiswa nokusiyana-siyana kwakaita hana dzevaKristu. Mumwe anogona kuona imwe tsika seyakaipa; mumwewo achiiona ichinakidza zvokuti anoshaya kuti chii chinoshoreka pairi. Somuenzaniso, kana pari panyaya yokunwa nevamwe, mumwe anonakidzwa nokuungana neshamwari vachinwira-nwira vachitandara zvavo manheru; mumwe zvinotomukanganisa. Nei paine misiyano yakadaro, uye inofanira kutibatsira sei pakusarudza?
13 Pane zvakawanda zvinoita kuti vanhu vasiyane. Kwatakabva nako kwakasiyana-siyana. Somuenzaniso, vamwe vanonyatsoziva kamwe kamuitiro kavava nenguva vachiedza kusiya, zvichida vachimbokundikana. (1 Madzimambo 8:38, 39) Kana pava panyaya yokunwa, vanhu vakadaro vanowanzoona hana dzavo dzichivanetsa. Kana munhu akadaro akakushanyira, hana yake ingaita kuti arambe hwahwa kana ukamupa. Uchamutsamwira here? Uchamumanikidza here? Kwete. Kana uine rudo nehama yako ucharemekedza zvido zvake, kunyange kana usingazivi zvikonzero zvake zvokuramba, nokuti pamwe haakwanisi kukuudza zvikonzero zvacho ipapo.
14, 15. Hana dzevaKristu vekutanga dzaisiyana panyaya ipi, uye Pauro akavakurudzira kuti vaite sei?
14 Muapostora Pauro akaona kuti hana dzevaKristu vekutanga dzaisiyana zvikuru. Panguva iyoyo vamwe vaKristu vaiona zvisingaiti kuti vadye zvimwe zvokudya zvainge zvakabayirwa kuzvifananidzo. (1 VaKorinde 10:25) Hana yaPauro yakanga isingamurambidzi kudya zvinhu zvakadaro kana zvava kutengeswa kumisika. Iye aiona zvidhori zvisiri chinhu; zvidhori zvaisagona kuva ndizvo zvakasika zvokudya asi kuti zvokudya zvaibva kuna Jehovha. Asi Pauro ainzwisisa kuti vamwe vakanga vasina maonero akadaro. Vamwe vangadaro vaimbonamata zvidhori vasati vava vaKristu. Kwavari, chinhu chipi zvacho chakatomboshandiswa pakunamata zvidhori chaigumbura. Saka zvaizoitwa sei?
15 Pauro akati: “Kunyange zvakadaro, isu takasimba tinofanira kutakura kushayiwa simba kwevaya vasina kusimba, tisingazvifadzi. Nokuti kunyange Kristu haana kuzvifadza.” (VaRoma 15:1, 3) Pauro akataura kuti tinofanira kufunga zvakanakira hama dzedu tisati tafunga zvakatinakira, sezvakangoitwawo naKristu. Achitaura nezvenyaya imwe chete iyoyo, Pauro akati aisva zvake arega nyama pane kuti agumbure gwai rinokosha rakafirwa naKristu.—Verenga 1 VaKorinde 8:13; 10:23, 24, 31-33.
16. Nei vaya vane hana dzisingavabvumiri kuita zvimwe zvinhu vasingafaniri kutonga vamwe vane hana dzakasiyana nedzavo?
16 Vaya vane hana dzisingavabvumiri kuita zvimwe zvinhu havafaniriwo kushora vamwe, vachingoda kuti vamwe vose vaone zvinhu sezvavanoita ivo. (Verenga VaRoma 14:10.) Chokwadi, hana inofanira kushandiswa kuzvitonga kwete kutonga vamwe. Yeuka mashoko aJesu okuti: “Regai kutonga kuti murege kutongwawo.” (Mateu 7:1) Hapana munhu ari muungano anofanira kutonga vamwe panyaya dzehana. Asi kuti tinofanira kutsvaka nzira dzokuita kuti vanhu vadanane uye vabatane, vachivakana kwete kuputsana.—VaRoma 14:19.
KUBATSIRA KUNOITA HANA YAKANAKA
Hana yakanaka inotitungamirira murwendo rwoupenyu, inotipa mufaro uye inoita kuti tidekare
17. Hana dzevanhu vakawanda dzaita sei mazuva ano?
17 Muapostora Petro akanyora kuti: “Ivai nehana yakanaka.” (1 Petro 3:16) Chikomborero chaicho kuva nehana yakachena pamberi paJehovha Mwari. Yakasiyana nehana dzevanhu vakawanda variko mazuva ano. Pauro akatsanangura nezvevaya “vane hana dzakapiswa sokunge nesimbi inoisa mucherechedzo.” (1 Timoti 4:2) Simbi inoisa mucherechedzo inonamura nyama, ichiisiya yava nedzvanga uye isisanzwi kurwadziwa. Vakawanda vane hana dzakafa, dzine madzvanga uye dzisisanzwi kurwadziwa zvokuti hadzichavanyeveri kana kuvaita kuti vanyare pavanenge vaita zvakaipa. Mazuva ano vanhu vakawanda vanotofara kuti hana dzavo hadzicharovi.
18, 19. (a) Zvingabatsirei kunzwa uine mhosva uye uchinyara? (b) Tingaitei kana hana yedu ikaramba ichitinetsa nezvezvivi zvakapfuura zvatakatopfidza kare?
18 Chokwadi ndechokuti kana tichinzwa tiine mhosva hana yedu inenge ichitotiudza kuti takanganisa. Kana manzwiro iwayo akaita kuti mutadzi apfidze, anogona kuregererwa kunyange atadza zvakadii. Somuenzaniso, Mambo Dhavhidhi akava nemhosva yakakura asi akaregererwa zvikurukuru nokuti akapfidza zvechokwadi. Kuvenga kwaakaita zvakaipa zvaakanga aita uye chido chake chokuteerera mitemo yaJehovha kubvira ipapo zvichienda mberi, zvakamuita kuti azvionere oga kuti Jehovha ‘akanaka uye akagadzirira kukanganwira.’ (Pisarema 51:1-19; 86:5) Ko kana tikaramba tichinetswa zvikuru nokunzwa tiine mhosva kunyange tapfidza uye taregererwa?
19 Dzimwe nguva hana inogona kunyanya kutongesa munhu, ichiramba ichitambudza mutadzi kunyange pasina zvazvichamubatsira. Pakadaro tinofanira kuudza mwoyo wedu unenge uchitipa mhosva kuti Jehovha mukuru kupfuura manzwiro ose anoitwa nevanhu. Tinofanira kutenda uye kubvuma kuti ane rudo uye anokanganwira, sezvatinokurudzira vamwe kuti vaite. (Verenga 1 Johani 3:19, 20.) Ukuwo hana yakachena inoita kuti tidekare, tive norunyararo, uye mufaro wakakura usingawanzowaniki munyika ino. Vakawanda vakamboita zvivi zvakakura vakawana zororo rakadaro uye nhasi vane hana yakanaka sezvavanoshumira Jehovha Mwari.—1 VaKorinde 6:11.
20, 21. (a) Bhuku rino rakanyorerwa kuti rikubatsire kuitei? (b) Tine rusununguko rwakaita sei sevaKristu, asi tinofanira kurwushandisa sei?
20 Bhuku rino rakanyorerwa kuti rikubatsire kuwana mufaro iwoyo, uye kuti uve nehana yakanaka mumazuva ose asara enyika ino yaSatani yakazara nematambudziko. Zviri pachena kuti harisi kuzotaura nezvemitemo yose iri muBhaibheri yaunofanira kufunga nezvayo yaungada kushandisa panomuka dzimwe nyaya zuva nezuva. Uyezve, usatarisira kuti uchaudzwa zvokuita nezvokusaita panyaya dzehana. Chinangwa chebhuku rino ndechokukubatsira kudzidzisa hana yako uye kuiita kuti ishande kuburikidza nokudzidza kushandisa Shoko raMwari muupenyu hwako hwezuva nezuva. “Mutemo waKristu” wakasiyana noMutemo waMosesi pakuti unoita kuti vanoutevera vararame vachinyanya kutungamirirwa nehana uye kuongorora panobva mitemo kwete kutungamirirwa nemitemo yakanyorwa. (VaGaratiya 6:2) Saka Jehovha anopa vaKristu rusununguko rwakakura. Zvisinei, Shoko rake rinotiyeuchidza kuti tisashandisa rusununguko irworwo “sechinhu chokufukidzisa zvakaipa.” (1 Petro 2:16) Asi rusununguko rwakadaro rwunotipa mukana wakanaka wokuratidza kuti tinoda Jehovha.
21 Paunofunga nezvokuti ungashandisa sei zvinotaurwa neBhaibheri wozoita zvawasarudza, unenge uchienderera mberi nemararamiro awakava nawo pawakatanga kuziva Jehovha. ‘Simba rako rokunzwisisa’ richarovedzwa ‘nokurishandisa kwauchaita.’ (VaHebheru 5:14) Zuva roga roga uchaona kuti kuva nehana yakadzidziswa neBhaibheri kunobatsira zvechokwadi. Kungofanana nekambasi inotungamirira munhu ari kufamba, hana yako ichakubatsira kusarudza zvinoita kuti Baba vako vokudenga vafare. Izvi zvichaita kuti uve nechokwadi chokuti ucharamba uri murudo rwaMwari.
^ ndima 5 Zviri pachena kuti chiri kurehwa pamienzaniso yakaita souno ihana. Shoko rokuti “mwoyo” rinowanzoreva munhu womukati. Pamienzaniso yakaita souno, riri kureva munhu sezvaari nechomukati, kureva hana yake. MuMagwaro echiKristu akanyorwa nechiGiriki, shoko rakashandurwa kuti “hana” rinowanika kanenge ka30.
^ ndima 8 Bhaibheri rinoratidza kuti nyaya yehana haingopereri pakuti uri kunzwa isingakupi mhosva. Somuenzaniso Pauro akati: “Nokuti hapana chandiri kuziva chandinopomerwa. Asi handinzi ndakarurama neizvi, asi Jehovha ndiye anondiongorora.” (1 VaKorinde 4:4) Kunyange vaya vanotambudza vaKristu, sezvaimboitwa naPauro, vangazviita vasinganetswi nehana nokuti vanofunga kuti Mwari anofarira zvavari kuita. Zvinokosha kuti hana yedu isatipa mhosva uyewo kuti ive yakachena mukuona kwaMwari.—Mabasa 23:1; 2 Timoti 1:3.
^ ndima 10 Zvakanaka kuziva kuti vanachiremba vakawanda vanoti kana munhu ava chidhakwa hazviiti kuti umuudze kuti anwe zvine mwero; kwaari kunwa “zvine mwero” kunenge kwafanana nokurega kunwa.
Kuziva kuti Jehovha ari kutiona nguva dzose kunofanira kuita kuti hana yedu iite sei?—VaHebheru 4:13.
Hana yaJosefa yakamubatsira sei kuti asakundwa nomuedzo?—Genesisi 39:1, 2, 7-12.
Nei kuva nehana yakachena kuchikosha pakunyengetera kuna Jehovha?—VaHebheru 10:22.
Nei tichifanira kufunga nezvehana dzevanhu vasinganamati?—2 VaKorinde 4:1, 2.
Tingava sei nechokwadi chokuti zvisarudzo zvedu zvinoenderana nekuda kwaMwari? Chii chingatibatsira kuti tiite zvatinenge tasarudza?